Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qalliinka - Shiinaha Warshadda Qalitaanka Qalitaanka
Ku saabsan Wanyu
Jadwalka Hawlgalka Mechnical
Shaxda Hawlgalka Korantada
Nooca Mashiinka Korantada
Nooca Haydarooliga Korantada
Jadwalka Hawlgalka Haweenka
Jadwalka Hawlgalka Indhaha
Waxyaabaha hogaaminaya shirkadeena waa miisaska farsamaynta farsamooyinka farsamooyinka TS, miisaska TD taxanaha miisaska korantada, taxanaha DD muraayado fara badan, laambadaha hawlgalka oo dhan, laambadaha hawlgalka ee taxanaha LED, farsamada iyo korontada, miiska hawlgalka badan ee hidda, sariirta dumarka , Baahiyaha caafimaadka, ICU qaybta daryeelka degdegga ah buundada laalista iyo qalabka kale ee caafimaadka.
TS-D-100 Qalabka korantada Gaaska Caafimaadka ee Labaad ee O ...
TS-DQ-100 Double Gacmaha korontada Endoscopic P ...
QF-JX-300 Shiinaha ICU Medical Kala Bridge Ballaaran ...
TD-TS-100 Warshadda Tooska ah ee Bixinta Caafimaadka Iskujira P ...
TS-D-100 Gaaska Labaad ee Korantada Gaaska Caafimaadka ee Qolka Howlgalka
TS-D-100 waxaa loola jeedaa labalaab gacmeed gaaska caafimaadka gaaska.
Qaadista suunka waxaa wada koronto, taas oo ka dheereysa, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.
Iyada oo leh qol wareega oo laba jibbaaran, kala duwanaanta dhaqdhaqaaqa ayaa ka ballaaran. Waxay si fiican u heli doontaa bukaanka.
Dhererka gacanta wareegsan iyo gaasaska, godadka korantada ayaa loo habeeyay.
Ku dar gaaska qiiqa iyo nitrogen oxide interface, oo loo cusbooneysiin karo suuxdinta suunka caafimaad.
TS-DQ-100 Double Arm Electrical Medical Endoscopic Pendant oo ka socda Warshadda
TS-DQ-100 wuxuu loola jeedaa labalaab gacmeedka korantada endoscopic korantada. Waa qalab muhiim u ah qalliinka Laparoscopic. Waxaa ku shaqeeya koronto, aad u habboon oo dhakhso badan. Kaliya ma gudbin karo korantada iyo gaaska, laakiin sidoo kale waxay dhigeysaa qaar ka mid ah qalabka caafimaadka. 100% u habeyn cabir ahaan, goobaha gaaska caafimaadka, iyo godadka korantada. Naqshad qaabaysan, waa la casriyeyn karaa mustaqbalka.
TS-Q-100 Wareeg Labaad Mechnical Qalliinka Endoscopic Pendant
TS-Q-100, waxaa loola jeedaa labalaab gacan-qabe farsamo-yaqaan endoscopic ah. Waa mid ka mid ah qalabka qalliinka lagama maarmaanka u ah qalliinka casriga ah ee loo yaqaan 'laparoscopic surgery'. Kaliya maahan in la dhigo qalabka caafimaadka, laakiin sidoo kale waxaa la bixin karaa koronto iyo gaas. Labada gacmood oo wareegaya, dhererka gacanta waa la habeyn karaa waana la beddeli karaa 350 darajo, iyadoo la siinayo meelo badan oo dhaqdhaqaaq ah.
TS-100 Double Arm Mechanical Operation Pendant ee Shiinaha
TS-100, qaabkani wuxuu loola jeedaa labalaab gacmeed farsamo gacmeed.
Naqshadaynta labada-gacmood waxay kordhisaa booska waxqabadka ee shaashadda caafimaad.
Dhererka gacanta wareegsan waa la habeyn karaa.
Jirka sanduuqa iyo cududda gacanta labaduba way isku shaandheyn karaan illaa 350 darajo.
TD-Q-100 Buug-Hal-Gacmeed Caafimaad Endoscopic Pendant for Hospital
TD-Q-100 waxaa loola jeedaa hal gacan oo farsamo gacmeed endoscopic ah.
Qaab dhismeed kooban iyo astaamo boos oo yar, waa goob ku habboon kalkaalinta caafimaad ee cosbitaalada yaryar iyo qaybaha daryeelka degdegga ah ee ku xaddidan aagga waaxda.
Waxay bixin kartaa gudbinta korantada, gudbinta gaaska iyo adeegyada gudbinta xogta, waxayna dhigtaa qalab caafimaad.
TD-100 Hal-Gacan Mechanical Medical Saqafka Santarka for Hospital
TD-100, qaabkani wuxuu loola jeedaa hal gacan oo gacan bir ah oo farsamo qalliin ah.
Qaab dhismeedka caadiga ah ee goobaha gaaska waa 2x O2, 2x VAC, lx AIR.
TD-Q-100 Single Arm Electric Qalliinka Endoscopic Pendant for the Operation Tiyaatarka
TD-DQ-100 waxaa loola jeedaa hal gacan koronto oo keliya oo qalliinka qalliinka endoscopic ah. Qalabkan loo yaqaan 'endoscopic pendant' ayaa kor iyo hoos ugu socon kara nidaamka korontada ku shaqeeya. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qolka qalliinka, qolka gurmadka, ICU iyo qolka soo kabashada. Waxay badanaa u adeegsan jirtay inay bixiso gudbinta korantada, gudbinta gaaska iyo adeegyada gudbinta xogta, iyo dhigto qalab caafimaad.
TD-D-100 Hal Qalliinka Gaaska Qalliinka Korontada leh Shahaadooyinka CE
TD-D-100 waxaa loola jeedaa hal gacan oo koronto ku xiran gaaska qalliinka.
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qolka qalliinka iyo ICU. Qaadista suunka waxaa wada mootada, taas oo aan ahayn oo kaliya dhakhso iyo waxtar leh, laakiin sidoo kale amaan iyo kalsooni badan.
Waxaa loo abuuray dhammaan adeegyada korantada, xogta iyo adeegyada gaaska caafimaadka.
Cinwaanka: Room 1401, Dhismaha Caalamiga ah ee Shangcheng, No.505, Caoyang Road, Shanghai